Dhaabbanni Fayyaa Addunyaa tamsa’ini dhibee Vayirasii Koroonaa Sadarkaa yaaddeessaa irra gahuu akeekkachiise - NuuralHudaa
Dhaabbanni Fayyaa Addunyaa tamsa’ini dhibee Vayirasii Koroonaa Sadarkaa yaaddeessaa irra gahuu akeekkachiise
Daayrektarri Dhaabbata Fayyaa Addunyaa Dr. Tedroos Adihanom ibsa Khamiisa har’aa kenneen, biyyoonni Addunyaa tamsa’ina Vayirasicha ittisuudhaaf hatattamaan tarkaanfii cimaa yoo kan hin fudhanne tahe, gaga’amni hamaan muudatuu mala jechuun akeekkachiise. Dr. Tedroos itti dabaluudhnis biyyi kamiyyuu Vayirasichi gara keenna hin seenu jedhee yoo kan yaadu tahe, balaa hamaaf kan of-saaxilaa jiru tahuu ibse.
Vayirasichi hanga ammaa biyyoota 48 keessatti argamuu mirkanaahee jira. Dabalataanis Chaayinaan alatti lakoofsi namoota haarayatti vaayirasichaan qabamanii ammoo, yeroo jalqabatiif lakoofsa namoota Chaayinaa keessatti vaayirasichaan haarayatti qabaman kan caale tahuu gabaafame.
Haaluma kanaan hanaga har’a February 27, 2020 tti:
Chaayinaa: Lakkoofsi namoota Vayirasichaan qabamanii-78,497 ol
Lakoofsi namoota du’anii-2744
Kooriyaa Kibbaa: Lakkoofsi namoota Vayirasichaan qabamanii -1766
Lakoofsi namoota du’anii-13
Jaappaan: Lakkoofsi namoota Vayirasichaan qabamanii -189 fi Markaba Jaappaan-705
Lakoofsi namoota du’anii-5
Xaaliyaan: Lakkoofsi namoota Vayirasichaan qabamanii -528
Lakoofsi namoota du’anii-14
Ameerikaa: Lakkoofsi namoota Vayirasichaan qabamanii-60 gahanii jiru.
Biyyoonni Baha Jiddu Galaa Vayirasichi keessatti argame 11 gahanii jiru.
Iiran: itti aanaan ministeera Fayyaa biyyattii Iraj Harirchi Vayirasii Koronaatiin qabamee jira. Akkasuma miseensi Paarlaamaa biyyattii tokko fi Itti aantuun Prezdaantii biyyattiitis Vayirasiichaan qabamanii jiran. Lakkoofsi lammiilee biyyattii Vayirasichaan qabaman 245 akka gaheefi, lakkoofsi nammoota du’anii ammoo 26 gahuu ibsame.
Afgaanistaan fi Paakistaan: Kutaa biyyootni lamaan Iiraan waliin wal daangessan keessatti namoonni heddu Vayirasichaan qabamuu mirkanaahee jira. Biyyoonni naannichaa kanneen biroo Vayirasichi keessatti argamuu mirkaneessan:
Emreets-13, Masri -1, Bahreeyn-33, Omaan-4, Kuweeyt-43, Iraq-6, Lubnaan-2, Aljeeriyaa-1, Israa’el-3 vayirasichaan qabamuu gabaafame.
Guutuu Addunyaa: Lakkoofsi namoota Vayirasichaan qabamanii -81,300 ol
Lakoofsi namoota du’anii-2800 ol
September 28, 2021 sa;aa 3:54 am Update tahe